प्रदेश ५ मा साउनभित्र कोभिड १९ को संक्रमण स्थिर बनाइने – Health Post Nepal
प्रदेश ५ मा साउनभित्र कोभिड १९ को संक्रमण स्थिर बनाइने
२०७७ जेठ १० गते १९:३७
प्रदेश ५ मा आउने साउन महिनाभित्रमा सतर्कता र रोकथाम गरी कोरोना भाइरस (कोभिड १०) मा स्थिर बनाउने प्रदेश ५ सरकारका प्रमुख धर्मनाथ यादवले बताएका छन्। उनले क्वारेन्टाइन, कोरोना अस्पताल, आइसोलेसन र परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कोभिड महामारीको अवस्था स्थिर बनाइने बताए।
प्रदेश ५ को संसदमा सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले नागरिकमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाइने क्रियायकलापहरू गरिने उनले बताए।
आउने आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम कोभिड १९ केन्द्रित हुने समेत उनले प्रदेश संसदमा जानकारी गराए। स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलक्षित गरी देशभित्रको उद्योग र कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नमा पहल गरिने उनले बताए।
कोभिड १९ को प्रभावलाई ध्यानमा राखी आउने वर्ष नयाँ योजना नआउने तर गत साल सुरु भएका अपुरो योजना पूरा गरिने र नयाँ कार्यालयहरू नखोलिने बताए। उनले स्थानीय तहलाई कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव मध्यनजर गरी बजेट दिइने बताए।
नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा यादवले भारतले कोभिड १९ को विषयमा दुई देशबीचको सहमति तोडेको आरोप लगाए। भारतले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा भारतबाट नेपाल भित्रिने नेपालीको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उनले उल्लेख गरे।
उनले आआफनै देशको क्वारेन्टाइनमा राखी, स्वास्थ्य परीक्षण गरी पठाउने सहमति भए पनि भारतले त्यसको पालना नगरेको उनले बताए।
प्रदेश प्रमुख यादवले अहिले संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
टाउकाेमा उपकरण जडान गरेर तनाबसम्बन्धी उपचार सम्भव हुँदै
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई काेराेना , अस्पताल भर्ना
मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा. शिवजी पौडेल निर्वाचित, सदस्यमा को–को भए ?
मेडिकल काउन्सिल मतगणना : ८५०० मतगणना हुँदा कसले कति मत पाए?
आज ६ हजार ९४४ जना सक्रिय संक्रमित, एक जनाको निधन
साइकल चलाउँदै अस्पताल पुगेकी एक सांसदले बच्चा जन्माइन्
मेडिकल काउन्सिल मतगणना : उपाध्यक्षमा डा. पौडेल र सदस्यमा डा.अग्रवालको जित निश्चित
डा. अनुप बाँस्तोला सरुवाको चौतर्फी विरोध, के भन्छन् मन्त्री खतिवडा?